VaChinamasa Vochinja Mashoko Avo paNyaya dzeNhaurirano
Mbudzi 04, 2011
Vari kutungamirira ZANU-PF munhaurirano, uye vari gurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, vanoti nhumwa dzemutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, dzichamboramba dzechiuya kuZimbabwe dzichiedza kutaura nemapato ezvematongerwo enyika ari muhurumende, kuitira kuti agadzirise misariridzwa iri kutadzisa hurumende kuti ifambire mberi zvakanaka.
Izvi zvinosanganisira nyaya dzisati dzazadziswa dziri muchibvumirano cheGlobal Political Agreement, GPA.
Mashoko aVaChinamasa anopesana zvachose nezvavakabuda vachitaura neChina mubepanhau reHerald.
VaChinamasa vakati ZANU-PF yainga yaneta nenhaurirano dzisiri kupera, vachiti MDC inotungamirwa naVa Morgan Tsvangirai, yainge isiri kuita zvayakabvuma kuti ichazoita pavakanyorerana pasi. VaChinamasa vakatizve bato ravo harisisina chivimbo nehuyananisi kwaVaZuma.
Imwe nhumwa yaVa Zuma, Muzvare Lindiwe Zulu, vanoti ivo nhaurirano dzichiri kuenderera mberi uye hapana bato rati rabuda pachena kwavari richiti rava kubuda munhaurirano idzi.
Muzvinafundo Stanford Mukasa, avo vanodzidzisa kutorwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko paIndiana University of Pennsylvania vanoti ZANU-PF haisi kuziva zvairi kuita, yavhiringika nenyaya yekusada sarudzo uye isina munhu anogona kutora kutonga kubva kuna VaMugabe.
Hurukuro naVa Mukasa